Ezigbo Atụmatụ About Leadership na Ị ga-achọ Gụọ - JobDescriptionSample.org
Home / Tips / Ezigbo Atụmatụ About Leadership na Ị ga-achọ Gụọ
Ezigbo Atụmatụ About Leadership na Ị ga-achọ Gụọ
Jekọb April 18, 2016 Tips 1 Comment 808 Echiche
Ò nwetụla mgbe ị dị gị onwe na a dịruru ná njọ ebe ndị ọzọ ndị mmadụ na-atụ anya ka ị na-a ndú ma ị na-enweghị ike na-egosipụta na-arụpụta na-edu ndú nka? Ị ga-emefu mmasị ma ọ bụrụ na ị na-ekwesịghị gafere karịa nke ọzọ. Isiokwu na-esonụ ga-egosipụta na ị na ihe ọ na-achọ inyere gụnyere ochichi ike gị onwe onye kwa ụbọchị ndụ.
Na Buy na-a magburu onwe onye ndú, mkpa ka ị-eme ihe n'eziokwu. Dị ka onye ndú, ị kwesịrị ịdị na-eme mgbalị iji na-edu ndị mmadụ na a magburu onwe N'ezie. Your na-eso ụzọ ga-ahụ gị ime ihe n'eziokwu na a ga-enwe ekele maka ya. Ị mgbe ga na-agbalị ịkwụwa aka ọtọ na ndị gị, dị ka o kwesịrị inwe mmetụta n'ahụ ha kwupụta eziokwu dị ka nke ọma.
Ime ihe n'eziokwu bụ oké mkpa a ndú. Irè isi na-pụrụ ịtụkwasị obi. Mgbe ị na-arụ ọrụ na gị ike n'ihi na-edu ndú, jide n'aka na ị na-anọgide na-ezi obi na onwe gị na ndị ọzọ. A nwoke ma ọ bụ nwaanyị ga-enwe ọtụtụ ihe ùgwù maka gị ma ọ bụrụ na ha na-eche dị ka ha nwere ike ịdabere na ma kwere na gị.
Your omume ịrụ ihe dị oké mkpa na ọnọdụ na-atụgharị n'ime a magburu onwe onye ndú. Ike ga-ga-comfy na nhọrọ ndị ị na-eme ka. Ọ bụrụ na ị kwere na a mbo ga-akpasu gị iwe, na-pụọ-agbada na ụzọ. Ọ bụ ezie na a ga-enwe ndị ikom na ndị inyom na a dị iche iche set nke omume ọma si n'ebe, i nwere na-na-nti na ị na-eme ihe ziri nke.
Iji a nnọọ mma enterprise ndú, mkpa ka ị na-agaghị eme belata gị omume dị nnọọ ka mpi. Ọ bụrụ na ị chọta gị agaghị anabata ihe gị mpi na-eme, mgbe ahụ, ọ dị gị ka ịhụ onye ọzọ na-aga ma o sina enwe asọmpi. E nwere usoro ka mpi enweghị kpukpru usen gị chọrọ. Ọ bụrụ na ị chepụta a ọhụrụ ụzọ anọ na egwuregwu, i nwere obi ụtọ.
Ilekwasị anya gị otu bụ n'ezie oge pụrụ iche dị ka onye ndú. Mee ka ọrụ siri ike na-agụ na otú e si enye agbamume na ike mmụọ nsọ na mmadụ ị na-edu. Dị ka onye ọzọ nke etinye nwekwara ọtụtụ iche na onye ihe aga-eme, kpalie ndị otu na-ebu kwesịrị ekwesị.
Jide n'aka na i nwere ebumnobi setịpụrụ maka azụmahịa gị dị ka a zuru ezu. All ndị mmadụ na-amasị nwere ụfọdụ ihe ha nwere ike igba maka, na a akwa onye ndú ga-eduzi ọrụ ha na direction. Ị nwere ike ọ bụghị naanị-enye mkpọsa na iche na ị na-arụ na-okokụre. Jide ọnwa ebumnobi nzukọ-ekwu okwu banyere onye ọ bụla na-enwe ọganihu.
Ị ga-enweta ụfọdụ oge kwa ụbọchị iji na-enyocha ma chọpụta na ọnọdụ na gburugburu ebe obibi na n'ebe ọrụ. Eme ka ụfọdụ nke gị subordinates na-ekwe ka ị maara otú ha chere n'ezie. Na-emeghe ka aro, ekwu okwu banyere mgbanwe a ga-kere na-arụ ọrụ na na eme mmekọrịta.
Ndú ntị nke ukwuu karịa okwu. N'ịbụ a akwa onye ndú bụ niile na-anụ ihe ihe ndị ọzọ nwere ikwu. Ntị ndị mmadụ na-arụ ọrụ n'okpuru ị. Nke a mejupụtara ha okwu na ị. Chepụta ihe ọ bụla na-arụ ọrụ a na-ekwu banyere ihe ihe bụ ka na otú folks na-eji ya. I nwere ike-ahụ otú budata na ị chọpụta na-ege ntị.
Ike isi ịghọta ha adịghị ike ha na-eme. Ọ bụrụ na ị bụ na-etu ọnụ, ị ga-ada. Akwụ echiche ebe ị chọrọ iji ike.
Nnọọ aka ruo gị emehie. Ọ dịghị onye bụ kacha mma. Inwe ruo gị emehie, gbazie ha ma na-amụ si ha bụ a elu àgwà nke a akwa onye ndú. Ọ ga-egosipụta ha na ị bụ mmadụ, dị nnọọ ka ha na-. Ebe kweta ọdịda nwere ike adịghị anya akwa, ọ dị umeala n'obi na-akwanyere ùgwù.
Mgbe a njehie-ewe ebe, a akwa onye ndú ga-eji dịruru ná njọ dị ka a likelihood chọpụta ihe, kama a ohere na-akatọ. Ekwurịta ihe isi ike na otú obibi ya ga-akwado ha a ukwuu.
Mee obi ike na ị na-mgbe na-achọ ịchọpụta ọhụrụ na-edu ndú ikike. Nweta ụfọdụ ihe ma ọ bụ na-aga noo na a typical ndabere ịghọta ọhụrụ nka na otú na-edu n'ụzọ kwesịrị ekwesị. E nwere na-emekarị ụzọ ọhụrụ ịghọta na ikike na-amụba. Mee obi ike ịnọgide na-enwe onwe elu-ụbọchị.
Personnel iche ndị ndú ha na-ekwurịta rụọ ọrụ nke ọma. Na-ege ntị na-kasị dị oké egwu àgwà nke onye ndú. Zere na-eleghara anya ọrụ ma ọ bụ asị na na ị ga-anụ ihe ha na-ekwu. Ọ bụrụ na e ọdọhọde, ntị ka ihe ha na-ekwu.
Lelee gị ego n'ọnụ ụzọ, na mgbe chebe gị anya si arụ ọrụ. Mgbe mgbe na-etinye gị onwe n'elu otu, ọbụna mgbe ị bụ isi na a ìgwè mmadụ. Ekwela nwalee arụzu ihe niile site na gị onwe. N'ikpeazụ, gị arụ ọrụ bụ ihe yiri ka ọ na-eme ka ị ma ọ bụ na-agbaji gị, otú inwe obi ike nnọọ onye ọ bụla na-ele oké egwu.
Ezi ọchịchị dị oké mkpa ka ihe nweta nke a ike. Otú o sina dị, ma ọ bụrụ na ị na-agaghị aghọta na-edu ndú iwu, pụrụ ịbụ na i chere na ị nwere ike ịbụ a ezigbo onye ndú. Anyị nwere olileanya na nsogbu nwere ike edozi site a post.
Previous Evidence ẹkesikpede Job Description Sample
Osote Site Inspector Job Description Sample
Pingback: The Top 11 Essential Job Interview Tips| | Obodo